မော်တာသိပ္ပံ the BLDC မော်တော်ယာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးအယ်လဂိုရီသမ်များကိုနားလည်ခြင်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်သိပ္ပံ the BLDC မော်တော်ယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာအလက်များကိုနိဒါန်းနားလည်ခြင်းနိဒါန်း - စားသုံးသူများသည်မိမိတို့၏အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဥယျာဉ်သုံးကိရိယာများနှင့်မော်တော်မောင်းနှင်သည့်ထုတ်ကုန်များကိုပိုမိုအားကောင်းစေခြင်း၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ ပိုမိုထိရောက်စေရန်လိုအပ်သည်။ များစွာသောစားသုံးသူအီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်စားသုံးသူများကဤအချက်ကိုမျှော်လင့်ကြသည်
BLDC ၏မော်တာကောင်းသည်၊ မကောင်းသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်မြန်ဆန်သောနည်းလမ်း။ A. Shake Table ကိုသုံးပါ။ Shaker shaker သည် motor ၏ three-phase windings (rated voltage 380V) နှင့် insulation ခုခံနိုင်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ အဆိုပါကိုယ်ထည်ရန်) ။ insulation res ...
၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁ ရက်နောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်တရုတ်အဆင့်သစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးနောက်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးများအကြားခြားနားချက်
21-05-01 အပေါ် admin ရဲ့အားဖြင့်
၂၀၂၁ ဇွန် ၁ ရက်နောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံ၏မော်တော်ယာဉ်များအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ၏စံနှုန်းအသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကန့်သတ်တန်ဖိုးများအကြားကွာခြားချက်တရုတ်နိုင်ငံ၏နောက်ဆုံးအမျိုးသားစံသတ်မှတ်ချက် GB ၁၈၆၁၃-၂၀၂၀“ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကန့်သတ်ထားသောတန်ဖိုးနှင့်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအဆင့်များ ... ”
မော်တာစစ်ဆေးခြင်း၏အခြေခံဗဟုသုတ ၁။ BLDC မော်တော်ကားစစ်ဆေးခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ စစ်ဆေးမှုမပြုမီ BLDC မော်တာကိုစစ်ဆေးပါ။ ပြproblemနာမရှိသည့်နောက်တွင်၊ မော်တာအားဆွဲ။ မလိုဘဲလည်ပတ်စေရန်အတွက်သုံးဆင့်ပါသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဆက်သွယ်ပါ။ ထို့နောက်လည်ပတ်နေသောအသံ၊ လည်ပတ်မှုလည်ပတ်မှုနှင့်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိသော curr ကိုစစ်ဆေးပါ။
အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ၏အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်? ယနေ့ခေတ်တွင်မော်တာစျေးကွက်သည်အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ အမြဲတမ်းသံလိုက် brushless motor များ၏ကြီးထွားနှုန်းသည်ကံကိုသာမဟုတ်ဘဲ ၁၀၀% ထက်ကျော်လွန်သည်မှာပုံမှန်ဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းသံလိုက်မော်တာများ၏ကြီးထွားနှုန်းသည်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည် ...
21-04-22 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
အလွန်အကျွံမြင့်မားသောမော်တာလည်ပတ်မှုအပူချိန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အကြောင်းရင်းများနှင့်အဖြေများပျက်ကွက်မှု၏အကြောင်းရင်း - ၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုဗို့အားသည်မြင့်မားလွန်း။ သံမဏိ၏အပူကိုတိုးစေသည်။ ၂။ power supply voltage သည်အလွန်နိမ့်ပြီး motor သည် rating load နှင့် curren များဖြင့်လည်ပတ်နေသည်။
A. Overload Protection bldc motor သည် overload fault ဖြစ်နေပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာသတ်မှတ်ထားသော current ထက်ကျော်လွန်ပါက bldc motor အားအပူလွန်ကဲစေခြင်း၊ protector သည် bldc motor ၏အပူစွမ်းရည်ကိုတွက်ချက်ရာတွင် ...
လျှပ်စစ်မော်တာ၏တွက်ချက်မှုဖော်မြူလာနှင့်နည်းလမ်း ၁။ မော်တာ၏လက်ရှိတွက်ချက်မှု - AC သုံးဆင့်ပါ ၀ င်သောကြိုးလေးခုပါ ၀ င်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုအတွက်လိုင်းဗို့အားသည် ၃၈၀၊ အဆင့်ဗို့အားသည် ၂၂၀၊ လိုင်းဗို့အားသည်မော်တာတစ်ခုအတွက်အမြန်သုံးဖက်ဗို့အားဖြစ်သည်။ , အကွေ့အကောက်များသော၏ဗို့အားသည်အဆင့်ဗို့အားနှင့် voltag ...
Brushless Motors ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
Brushless Motors ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ Brushless Motors ၏အားသာချက်: (၁) ဖြီး၊ အနိမ့်အဟန့်အတားမရှိ brushless motor သည် brush ကိုဖယ်ရှားပေးပြီးတိုက်ရိုက်အပြောင်းအလဲကတော့ brush motor ကိုလည်ပတ်တဲ့အခါလျှပ်စစ်မီးပွားများမရှိခြင်းကြောင့်၊ ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ...
၁။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုချွေတာနိုင်ပြီးအထည်အလိပ်၊ ပန်ကာ၊ ရေစုပ်စက်နှင့် compressor အတွက်အလွန်သင့်လျော်သောရေရှည်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ 2. ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း motor ကိုတိုက်ရိုက်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက်နှင့်အမြန်နှုန်းညှိခြင်းဖြင့်လုံးဝအစားထိုးနိုင်သည်; ၃။ ရလဒ်အနေဖြင့်ရှားပါးကမ္ဘာသည်ထာဝရတည်ရှိသည်ကိုပြသသည်။
20-01-07 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
Motor တုန်ခါမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိပြီး၎င်းတို့သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ ၈ တိုင်အထက်တွင်ရှိသောတိုင်များအများအပြားရှိသောမော်တာများသည်မော်တာထုတ်လုပ်မှုတွင်အရည်အသွေးပြmanufacturingနာများကြောင့်တုန်ခါမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ၂-၆ တိုင်မော်တာများတွင်တုန်ခါမှုရှိသည်။ GB10068-2000“ လှည့်မော်တာတုန်ခါမှု Lim ...
မော်တာ insulator တွင်လည်း
17-06-18 အပေါ် admin ရဲ့အားဖွငျ့ဖွစျသညျ
မော်တာပေါ်တွင် insulator တွင်လည်းအကွေ့အကောက်များသောအကြားဆက်သွယ်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးနှင့်ကမ္ဘာမှအကွေ့အကောက်များသော။ မော်တာများကိုကြည့်သည့်အခါ insulator တွင်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့်ယင်း၏လက်တွေ့ကျအသုံးချမှုကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ မာတိကာ 1. အဆင့်သတ်မှတ်ချက် IEC - NEMA အပူချိန်မြင့်မားစွာကာကွယ်ခြင်းသက်တမ်းနှင့်အပူချိန် 2. စစ်ဆေးခြင်း Insula ...
Power Drill အတွက် BLDC Controller, ဆံပင်ခြောက်စက်များအတွက် BLDC Controller, ဆံပင်အခြောက်ခံစက်အတွက် BLDC Motor Controller, Power Drill အတွက် FOC BLDC Controller, Power Drill အတွက် BLDC Motor Controller, Power Drill အတွက် FOC BLDC မော်တော်ထိန်းချုပ်မှု, စျေးနှုန်းစာရင်းအတွက်စုံစမ်းရေး
အမှတ် ၈၇၊ Dongfu ၄ လမ်း၊ Dongfeng မြို့၊ ၅၂၈၄၂၅၊ Zhongshan, Guangdong, China ။